Muxuu ka yiri Ronald Koeman kulankooda habeen dambe ee Champions League? – Gool FM
Barcelona oo garoonkeeda Camp Nou ku dubatay kooxda Valencia… +SAWIRRO
Ancelotti oo ku dhawaaqay liiska xiddigaha Real Madrid uga qeyb galaya kulanka Shakhtar ee Champions League… (Yaa ka maqan yaase ku soo baxay?)
Tababare Koeman oo si RASMI ah u shaaciyey liiska xiddigaha Barcelona ee ka qeyb galaya kulanka caawa ee Valencia
Kooxda Barcelona oo xiiseynaysa xiddiga khadka dhexe ee Man United, Nemanja Matic
Arsenal oo beddelka Alexandre Lacazette ka dhex aragta Kooxda Real Madrid… (Waa kee?)
Kooxda PSG oo liiska xiddigaha ay suuqa ka doonayso ku darsatay Robert Lewandowksi & Erling Haaland
Macallin Ole Gunnar Solskjaer oo aan laga ceyrin doonin shaqada Kooxda Manchester United
“Macquul ma’ahan inaad ‘maya’ ku dhahdo Conor” – Jose Mourinho oo McGregor kula kulmaya Rome
Wanda Nara iyo Mauro Icardi oo khilaaf xooggan soo dhex galay iyadoo tirtay sawirradii ay wada lahaayeen xilli ay si maldahan u sheegtay sababta ka dambeysa arrintan
Wakiilka Mohamed Salah oo soo gaaray Ingiriiska… (Miyuu wada-xaajoodka heshiis kordhinta laacibka reer Masar la billaabi rabaa Liverpool?)
Muxuu ka yiri Ronald Koeman kulankooda habeen dambe ee Champions League?
Dajiye September 28, 2021
(Barcelona) 28 Sebt 2021. Tababaraha Barcelona ee Ronald Koeman ayaa diiday inuu ku tilmaamo kulanka ay la ciyaarayaan kooxda Benfica mid muhim ah, isagoo xusay in heerka guruubyada ee Champions League uu weli dheer yahay.
Barcelona ayaa habeen dambe ee Arbacada ku booqan doonta kooxda Benfica garoonka Estádio da Luz, si ay u wada ciyaaraa ciyaar qeyb ka ah kulammada wareega labaad ee heerka guruubyada ee Champions League, Barca ayaana u baahan inay gaarto guul, kaddib guuldaradii ka soo gaartay naadiga Bayern Munich.
Haddaba tababare Ronald Koeman oo ka soo muuqday shir jaraa’id kahor kulankooda habeen dambe ee Champions League ay kula ciyaari doonaan kooxda Benfica, wuxuu yiri:
“Lama dhihi karo waa kulan wax lagu go’aaminayo, macquul ma ahan, kani waa kulankii labaad ee lixda kulan heerka guruubyada, ma noqon karo mid wax lagu go’aamiyo.”
“Ma aqaano haddii Benfica ay tahay kooxda fiican, laakiin waxaan ognahay inay tahay koox xooggan, inay tahay koox muhiim ah, waana ogahay qiimaheeda.”
“Waa ciyaar qurux badan, waa kulan u baahan natiijo wanaagsan iyo in lagu raaxeyso, waxaa jira laba kooxood oo leh qaab u gaar ah oo u ciyaara si ay u guuleystaan, waxaan filan karnaa kulan xiiso leh.”
Kooxda Liverpool oo hoggaaminaysa tartanka loogu jiro saxiixa Jude Bellingham.. (Halkee wax marayaan?)
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Paris Saint-Germain iyo Manchester City ee tartanka Champions League oo la shaaciyey